Fanangonana loharanom-pahalalana sary maimaimpoana amin'ity fahavaratra ity | Famoronana an-tserasera
Fanangonana loharanom-pahalalana sary maimaimpoana amin'ity fahavaratra ity
Miankina amin'ny zavatra noforoninay no tsy maintsy jerentsika ny vanin-taona mafana izay hamoahana ny asa. Ohatra: raha manao sary fonosana ho an'ny Facebook isika dia tsy mitovy amin'ny sary desambra ny sary aogositra (na farafaharatsiny, tsy tokony).
Manaiky ny maha-zava-dehibe ny mifandray amin'ny vahoaka, ary ny fijerentsika ny fotoana amin'ny taona misy antsika dia fomba iray hanaovana izany. Noho io antony io dia nanome anay loharanom-pahalalana sary (ankoatra ny pejiny) i Alejandro avy ao amin'ny Freepik.com izay mitovy amin'ny fahavaratra.
Ireo loharanon-tsary izay tianao hampiasaina amin'ny fahavaratra
Entana isan-karazany: rakitra ao anaty format .ai izay amboarina ny volo rehetra, izay azontsika atao ny mifidy sy mampiasa izay tiantsika rehetra. Aza adino fa, raha mampiasa an'ity fitaovana nomen'ny Freepik ity isika dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny trosantsika ny tranonkala ary arak'izany ny fahazoan-dàlana hampiasana.
Singa samihafa II: Manaraka ny lamina teo aloha, ato amin'ity rakitra ity dia manana andian-teny maro kokoa amin'ny teny anglisy momba ny fahavaratra isika.
Fety fahavaratra: rakitra ao anaty format .ai sy .eps izay nahitana ny soratra, ka raha hisolo azy dia tsy maintsy misafidy azy ianao, mamafa azy ary manoratra ny anao manokana. Raha te hanahaka ny karazana teny fahavaratra ianao, dia mila mahita iray mitovy amin'izany amin'ny Internet, na manova ny efa misy amin'ny tanana.
Sary amoron-dranomasina: hatsaran-tarehy fahagola, tsy misy contours. Apetraho amin'ny endrika .ai sy .eps izay tsy maintsy hampiasaintsika tahaka izao, satria tsy afaka mamafa ny lahatsoratra izahay.
Sary amin'ny antsipiriany: onja tonga any amoron-dranomasina, trondro kintana ary andian-teny amin'ny teny Anglisy izay manasa antsika hankafy ny fialantsasatra fahavaratra.
Fototra geometrika: fisie amin'ny endrika .ai izay ahafahantsika mamafa ny lahatsoratra izay misolo azy amin'ny endrika hafa (raha irintsika).
Famoronana typografika: fisie amin'ny endrika .ai izay ahafahantsika misafidy lahatsoratra vita amin'ny vector ampiasaina amin'ny firafitra hafa.
Andianteny voaravaka: fisie amin'ny endrika .ai sy .eps misy soratra vita amin'ny vector.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Fanangonana loharanom-pahalalana sary maimaimpoana amin'ity fahavaratra ity